Ukunyuswa kukaHanok | Apg29
Njengokuba uHanok wayehamba noThixo, waye engasekho;
IGenesis 5: 18–24: "Xa uYerede wayeneminyaka eli-162, wazala u-Hanok. Emva kokuzalwa kukaJarede, uHanoki waphila iminyaka engamakhulu asibhozo, wazala oonyana neentombi. Akuba minyaka imashumi asithoba anamihlanu ezelwe , wamitha ke. Wazala uMetushela iminyaka engama-65, kwaye emva kokuba uHanok ehlangane noMetushela , wahamba noThixo iminyaka engama-300 kwaye wayenoonyana neentombi, kwaye iminyaka yonke kaHanukkah wayeneminyaka engama-365, kwaye ekubeni uHanok wayehamba noThixo , wayengasekho. Umlandile .
H uyise anoks wafa. Ke kwakufuneka ehlelwe kukufa okuqhelekileyo njengabantu abaninzi. Kodwa uHanok akazange afe, kodwa uThixo wamthabathela kuye. UThixo wamthabathela kuye emhlabeni.
Lo msitho ngumzekelo wesiprofetho wokuvuselelwa kweTestamente eNtsha. Ukuphakanyiswa akukho nto intsha, kodwa sele ichaziwe ngokwesiprofetho kwiTestamente Endala. Kodwa le ntengiso yayifihlakele kwaye imfihlo yaqala ukutyhilwa kwiTestamente eNtsha.
1 Kor 15:51. Yabonani, ndinixelela imfihlakalo: Asifanele sonke ukuba silele, kodwa sonke siyaguqulwa.
Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba uHanok wahamba noThixo. Siya kuhamba emanyene noYesu. Ukuba simamkele uYesu, ngoko sikulungele xa eza kusisa ekhaya.
UHanok akafunyanwa, kuba ngequbuliso wayehambile. Ngendlela efanayo, abakholwayo kuYesu Kristu bayakuba njalo. Ngequbuliso baya kuba bemkile kwaye abayi kubafumana, kuba ngoku basekhaya noYesu Kristu.
Heb 11: 5. Ngokholo uEnoki [Hanok] wehliselwa ukuze angaboni kufa, ibe ke akaba safunyanwa ngenxa yokuba wayezisiwe nguThixo. Kuba ngaphambi kokuba abanjiwe, wayefumene ubungqina bokuba uyamkholisa uThixo.
U-Enoki (Hanok) wayekholelwa kuThixo, ngoko ke naye wehliswa. Ukuba uyakholelwa kuYesu kwaye usindisiwe, ngenye imini uyakuthathwa udibane noYesu emoyeni. Awuyi kushiywa ngaphandle.
Inye into ebangela umdla kukuba siphawule ukuba ngaphambi kokuba u-Enoki anyulwe nguThixo, wayenobungqina bokuba uyamkholisa uThixo. Ukuba umamkele uYesu kwaye usindisiwe, unabo ubungqina entliziyweni yakho ukuba ungumntwana kaThixo. Obu bungqina bucace gca engqondweni yakho. Akukho mathandabuzo. Kuyaziwa ukuba usindisiwe kwaye ungokaThixo.
1Yo 5: 10-11. Bonke abakholwayo kuNyana kaThixo banabo ubungqina ngaphakathi kwakhe. Lowo ungakholwayo, umenze ixoki, ngokuba engakholwanga bubo ubungqina abungqinele uNyana wakhe. Bubo obu ke ubungqina: ukuba uThixo usinike ubomi obungenasiphelo, kanjalo nobomi bukuye uNyana wakhe.
Ngeli xesha, uHanok (Enoki) wayelinde ukuba uThixo ambuyise, akazange ahlalele, kodwa ikhondo lobomi laqhubeka ngesiqhelo. Wazala oonyana neentombi. Wayesebenza kweli lizwe kwaye ekhonza uThixo ngokuhamba naye.
ITestamente eNtsha ithi bakhonza uThixo ophilayo ngelixa babelinde unyana wakhe uYesu Krestu evela ezulwini.
1 Tes 1: 9-10. Kuba bona ngokwabo basixelela ngendlela esamkelwa ngayo kunye nani, nendlela eniguqukele ngayo kuThixo, nivela kwizithixo, ukuze nikhonze uThixo ophilayo oyinyaniso, nokulinda kwakhe ezulwini, ngunyana wakhe, lowo wamvusayo kwabafileyo. , esisindisa kwingqumbo ezayo.
Ngendlela efanayo, thina esikholwayo kuYesu kufuneka sisebenze kweli lizwe, siye emsebenzini, sinyamekele iintsapho zethu, sihambe noThixo ngelixa silindele ukuba uYesu asize ekhaya.
"Yesu, ndincede ndiphile ubomi bam bemihla ngemihla kwaye ndikukhonze ngelixa ndikulindile ukuba undise ekhaya. Amen."